Oil DISTILLATION System pamwe Best High-Quanlity Products - China NIutech Environment
Industrial Kuramba Waste Plastic Pyrolysis Production Line
Industrial Kuramba chinyorwa Tire Pyrolysis Production Line
Industrial Kuramba Oil Sludge Pyrolysis Production Line
Industrial Kuramba Waste Rubber Pyrolysis Production Line
Oil DISTILLATION System pamwe Best High-Quanlity Products
Oil DISTILLATION hurongwa
1. Technical muitiro kurairirwa
Mushure zvakakwana kupanana kupisa chete chigadzirwa kubva lateral mutsetse DISTILLATION shongwe, mafuta mbishi anopinda furnace uye neshungu kuti tembiricha zvaida. The mafuta mbishi pashure nenharo dziri muvira iri Kutamiswa kupinda DISTILLATION yakasimba DISTILLATION, mumwe fter kutonhora, non-combustible gasi inogona akamuka ari pamusoro peshongwe, peturu kesimba panguva 1 ST mumhepo mutsetse, uye chiedza Diesel chakapatsanurwa pana 2 nd it ratinoona mutsetse, rinorema Diesel chakapatsanurwa pa 3 Rd mutsetse inoremerwa mafuta nechepasi shongwe. Wakisi kugutsikana mune mbishi mafuta mupurasitiki achiri yakakwirira; yakatsvuka mafuta Mapurasitiki anopinda wakaiswa mubhedha reactor nokuda CATALYTIC de-dzasimbiswa muitiro pashure kupisa kupanana kuburikidza chamatare, uye ipapo ari Kutamiswa kupinda DISTILLATION yakasimba DISTILLATION, uye mumwe lateral mutsetse chigadzirwa zvichabviswa ndokumuka. Non-combustible gasi iri chakaunzwa choto rinopisa mhando peturu. Peturu uye Diesel zvikamu zviduku zviri akaramba Kutamiswa kupinda mafuta kubatane nekuita marongedzero alkali Washing Refinery ndokusanganisa kuti vawane simba peturu uye Diesel zvinogona kusangana musika chinodiwa. The rinorema mafuta ari pasi shongwe iri Kutamiswa kupinda rinorema mafuta mafuta tangi kupa huni choto uye hwemvura bhaira; asi akazorora mafuta rinorema zvichabviswa sezvaiita maererano kumusika chinodiwa uye kutengeswa sezvo mafuta mumarambi.
2. Equipment Constitution uye Main Equipment
The mafuta DISTILLATION chikwata inokamukana zvachose kupinda 8 hurongwa sezvo zvinotevera: Steam bhaira gadziriro Raw mafuta gadziriro wose lateral mafuta mutsetse gadziriro Non-combustible gasi hurongwa Cooling mvura hurongwa Compression hurongwa Oil ndokusanganisa hurongwa Control hurongwa
3. Features nezvazvakaipira
1. It munogona kuona chichiitika, kubatane nekuita uye Refinery yemafuta mbishi, maximize muitiro anokwanisa kwakakwana akagadzirwa midziyo, kuderedza kugadzirwa nguva uye optimize kunaka goho, panguva ino, kugadzirwa kushanda zvakanaka uye zvebhizimisi kwemari zvichabviswa akavandudzika yekudyidzana. 2. Non-combustible gasi iri chakaunzwa choto rinopisa huni, izvo kwete chete kunoderedza kusvibiswa achine uye anoponesa simba uyewo lowers mutengo. 3. chikuru zvakwakanakira Matatu wakaiswa mubhedha reactor: (1). Zvinobudirira kugadzirisa dambudziko kuti kusachena tigutsikane mumafuta yakatsvuka kunyange yakakwirira kuti deactivates tiwedzere nokukurumidza. (2). Inogona kuona nokuva gombedzero marara uye kuderedza uchishandisa mutengo kwazvo. (3). The CATALYTIC de-dzasimbiswa kushanda havagoni chete kuvandudza zvibereko mwero peturu uye chiedza Diesel dzakakwirira akawedzera-ukoshi, uyewo kuvandudza mafuta unhu zvinobudirira. 4. The kwakakwana akagadzirwa DISTILLATION gadziriro iri kwaita nemauto PLC (Programmable pfungwa kuzvidzora) hurongwa, inowana kuti vapiwa kudzora bhuku pfungwa uye ane akawanda mashandiro, akadai, mashoko muunganidzwa, kukarukureta, zvinyorwa, anodhinda mushumo nezvimiro, aramu uye zvichingodaro.
Industrial chinoenderera, hombe throughput, kuwedzera kurapwa kushanda zvakanaka uye kugadzirwa kugona. Exclusive pasi tembiricha pyrolysis michina, pasi rakawanda, kuwedzera mafuta goho uye quality, nechokwadi yakareba, chinoenderera uye rakadzikama nokushanda kugadzirwa, zvinoshamisa vawedzere midziyo * lifespan. Exclusive Anti cocking, chafariz Kuparadzirwa michina, dzinoita zvinhu zvakafanana nenharo uye? Pyrolized zvachose, kuti kubudirira yepamusoro chigadzirwa. Chete inopisa chisimbiso zvigadzirwa, nechokwadi nokushanda ngozi uye hwakavimbika. Exclusive gasi yokunatswa uye kuramba kupisa marara Utilisation michina, ndokunatsawo gasi inogona kushandiswa kudziyisa hurongwa sezvo combustible gasi, vasara kupisa inogona dully kushandiswa, vakaona kuzvidzora anopa pyrolysis maitiro pasina mamwe kudziyisa bhuku, zvinoshamisa kuderedza achimhanya mutengo. Pedza gasi okuwana mutsetse akaedzwa, zvose anobuda parameter kusangana nezvaidiwa EU EEA pamusoro EU uye US EPA. Yose dzaFord dzinotevedzera PLC akangwara kuzvidzora, yambiro, aramu uye car-kururamiswa basa, inishuwarenzi kushanda pasi vakachengeteka ezvinhu. Low chinodiwa kuti manpower, Low vanoshanda zvakanyanya uye yakachena kugadzirwa.
Tikaenzanisa Chart "Tikaenzanisa ruzivo rwokugadzira zvinhu pakati mudzimba uye kunze"
Achine Specification achiita zvaidiwa EEA mureza mu EU uye EPA chiero mukati US
The kungovimba Zvivako vakasarudzwa zvinoenderana nzwisisika Utilisation tsvina tai indasitiri mapindiro mamiriro wakabudiswa MIIT
Previous: tsvina epurasitiki pyrolysis chirimwa Best High-Quanlity Products
Next: Industrial runoramba chinyorwa Tire Pyrolysis midziyo
Q: Chii rokuva anoda kuti unogona kupa?
A: Tinogona kupa 10000T / Y} 20000T / Y} 30000T / Y uye kugona yakakura
Q: chii kuitwa hurongwa mhando unokwanisa kupa?
A: Industrial runoramba chinyorwa Tire Pyrolysis Production Line; Industrial Kuramba Waste Plastic Pyrolysis Line; Oil DISTILLATION hurongwa; Carbon Black Uyezve Treatment System
Q: The Space Kukosha?
Q: Labor Kukosha?
A ㄩ No basa rinodiwa munguva kugadzirwa, asi chete kutonga, rokuongorora uye chokufambisa. Kana munhu 10,000T / Y mutsetse, izvozvo tinoda pebasa anenge 3-4 / kusuduruka
Q: Will boka rako zvinopa Onsite Installation uye Tendeukai-Key Project?
Q: Ungaratidza sei kuti zvemichina wako uye midziyo ndiye zvemberi uye irambe mumwe mumunda?
A ㄩ We vanosimbirira chokubatanidza theoretics uye tsika munyika dzichiri zvemichina yedu. Tine makore akawanda anobatsira kushanda zvakaitika pyrolysis chirimwa uye takawana uye akaita kuti ndiwedzere uye nadzurudzo zvinoenderana. At Zvichakadaro, tine zvakawanda wezvokutengeserana uye kuramba kumhanya vatengi * zvinomera munyika dzakasiyana.
Q: Ungakwanisa kugovera nzvimbo kushanya kwenyu kumhanya chirimwa?
Q: Ndezvipi zvikumbiro mafuta uye kabhoni dema
A: The mafuta Specification zvinoberekwa edu kuramba pyrolysis dzaFord iri maererano SH / T0356-1996 No 4 Light Fuel Oil. The dzikabereka mafuta ane mukuru kupisa rinokosha uye pasi nesarufa kugutsikana, aigona kushandiswa pomoto, jenareta uye yakatsvuka mafuta DISTILLATION etc. The mafuta pashure DISTILLATION muitiro aigona kuiswa nokuti guru simba-pasi nokukurumidza Diesel injini, engineering okurima motokari / marina injiniya uye ose emagetsi. Nokuti kushanda Carbon Black, tapota nesu kuwana mamwe mashoko
Oil yokuzvinatsa midziyo
Next: Dongo Plastic Pyrolysis Machine pamwe Zvizere chichingoitwa Operation
Kuramba Oil Sludge Pyrolysis Equipment
Kuramba chinyorwa Tire Pyrolysis Production Line
Industrial runoramba chinyorwa Tire Pyrolysis Machine
Industrial Kuramba Waste Plastic Pyrolysis Machine
Oil yokunatsira Plant
Oil Sludge Recycling Machine
Oil Sludge neunyanzvi Treatment Equipment
Pyrolysis Plastic To Mafuta
chinyorwa Tire Pyrolysis Plant
Dongo Plastic Pyrolysis Production Line
tsvina Plastic Recycling Machine
Dongo Plastic neunyanzvi Treatment Equipment
Dongo Plastic To Fuel Equipment
Waste Plastic To mafuta Plant
Dongo Plastic To Oil Equipment
Dongo Plastic To Oil Plant
Dongo Rubber Pyrolysis Equipment
Dongo Tire Recycling Equipment
Latest zvigadzirwa Kuramba Waste Tire Pyrolys ...
4804 Zimbabwe Center, 25 Gongqingtuan Rd, Shizhong District, Jinan, Shandong
Where Ko kupambadza Pakupedzisira Tire Get?
Warm makorokoto kune bhodhi idzva Itsva ...
Niutech New Website pamutemo Online